Ungakala Kanjani Futhi Uthuthukise Isu Lakho Lokumaketha le-Twitter | Martech Zone
Azikho izindaba eziningi kakhulu ku-Twitter ngaphambili futhi angikaze ngizwe kusuka kuJack kimi Vula incwadi ku-Twitter. Lokho kusho, ngisasebenzisa iTwitter nsuku zonke, ngithola inani phakathi komsindo ovala izindlebe, futhi ngifisa ukuthi liphumelele. Ungayisebenzisa i-Twitter ukusiza ukukhuthaza umkhiqizo wakho, umkhiqizo wezinkampani, imikhiqizo noma izinsizakalo? Kunjalo!
Amaphesenti angamashumi ayisikhombisa nesikhombisa wabasebenzisi bathole ibhizinisi elisha elincane noma eliphakathi ku-Twitter, nakulabo bantu, uhhafu walandelwa futhi wathengwa esitolo senkampani noma kuwebhusayithi. Ngaphezu kwalokho, abalandeli bakho bangaba namandla amakhulu emgqeni wakho: abalandeli abathathu kwabahlanu bathenga ngokususelwa kokuthile abakubonile kokuphakelayo kwabo, kanti ama-43% ahlela ukuthenga izinto eziningi ezinkampanini abazilandelayo. SurePayroll
I-SurePayroll ithuthukise le infographic - Izeluleko ezilula ze-Twitter Analytics zokuthuthukisa ngokushesha ukuzibandakanya kwakho - Ukuhumusha amathiphu wokumaketha nokulinganisa we-Twitter kule infographic enemininingwane:
Ukubonakala - kungakhathalekile okuqukethwe, ukuba ne-akhawunti yebhizinisi ephathekayo kuthuthukisa umbono womkhiqizo kubathengi.
Call to Action - abathengi banamathuba amaningi okuthi bathathe izinyathelo kulwazi oluku-Twitter kunokusebenzisa isayithi, isivumelwano senhlalo, i-imeyili, noma i-imeyili eqondile.
Ukuthengwa - Abalandeli abathathu kwabahlanu bathenga kusuka ebhizinisini elincane kuya kweliphakathi ngokususelwa kokuthile abakubonile ku-Twitter.
Ama-metric - isilinganiso sokuzibandakanya, ukukhula komlandeli, nokuchofoza amamethrikhi abaluleke kakhulu ngokusho kwe-Twitter.
I-infographic ingena ngokuningiliziwe ukuchaza imibiko eminingi namadeshibhodi atholakala ku-Twitter's Analytics, kufaka phakathi i-Tweet Activity kanye ne-Audience Insights.
Vakashela Ideshibhodi Yakho ye-Twitter
Ungakukhulisa Kanjani Ukuzibandakanya ku-Twitter
Tweet ku isikhathi esifanele usebenzisa amathuluzi afana I-Followerwonk, isikhumbulo sesikhana, nomaI-Hootsuite idatha nokuthumela okuzenzakalelayo.
Phathisa i- okuqukethwe okulungile usebenzisa izithombe, amavidiyo, izingcaphuno, izibalo nama-hashtag ukukhulisa ukwabelana.
Phathisa i- indlela efanele ngokuthumela amahlandla amaningi ngosuku, ukuphinda ama-tweets, ukusebenzisa izingxoxo ze-Twitter, ukwenza imicimbi ye-tweeting bukhoma, nokubonga labo ababelana ngokuqukethwe.
Isilingo ngamagama ahlukene, amafomethi, nokuvota.
Sebenzisa Amathuluzi njengoFollowerwonk no Buzzsumo ukuthola nokulandela abathonya.
Tags: umabhebhanabuzzsumoi-followerwonki-hootsuitephila imicimbi ye-tweetama-tweets aphilayoTwitterizingxoxo ze-twitterokuqukethwe kwe-twitterukuzibandakanya kwe-twitterizithombe ze-twitterUkumaketha kwe-Twitterisilinganiso se-twitteramamethrikhi we-twitterukwabelana nge-twitterisikhathi se-twitteramavidiyo we-twitterukuthi uzoTwitter nini
May 19, 2008 ku-6: 49 PM
Siyabonga ngokwabelana ngale vidiyo uDoug, kungiholele ekubhaliseleni i-Twitter namuhla… ngemuva kokuvakashela isayithi cishe izikhathi ezingama-30 ngonyaka odlule. Anginawo amaklayenti asebenzisa i-Twitter nokho, kepha ngicabange ukuthi ngingahle ngibavulele umkhondo. Mhlawumbe ngizoza nendlela yokuyisebenzisa ukumaketha ukwakhiwa kwewebhu.
Ingabe akhona amaklayenti ePatronpath asebenzisa i-Twitter? Noma ukuyihlola?
May 23, 2008 ku-3: 38 PM
Kuyangimangaza ukuthi iTwitter iqale kanjani. Ekuqaleni bengicabanga ukuthi kumane kuyimfashini, kepha bese ngiqala ukubona ukuthi kuyigugu. Kumnikazi webhulogi kuyindlela enhle yokuxhuma umphakathi wabafundi kuwe, futhi ngethemba lokuthi uzoqhubeka ebuyela kokunye…
I-Oct 17, i-2008 ku-11: i-38 PM
Nami ngisebenzisa i-Twitterfeed… enye ewusizo olukhulu yi-Tweet Kamuva (www.tweetlater.com). Ngaphezu kokuthola lokho okuthunyelwe kubhulogi kudluliselwe ku-twitter nge-TwitterFeed, ungathumela nemiyalezo yokwamukela ngokuzenzakalela, imiyalezo eqondile, futhi ulayini nama-tweets azokhishwa ngezinsuku ezizayo usebenzisa i-tweet ngokuhamba kwesikhathi. Ithuluzi elihle lezinjongo zokumaketha uma uphonsa isixhumanisi kumilayezo yokwamukela ngokuzenzakalela.
Nginombiko wamahhala namanye amavidiyo ahambisana nakho konke ukumaketha kwe-Twitter nokuthola ithrafikhi evela ku-twitter ongakuthola kuwumdlalo omuhle nabafundi bakho. Ngazise uma unentshisekelo yokukhuluma nge-twitter ngaphezulu, nganoma yisiphi isikhathi, futhi kube lula kuwe.
Ngilula ukuthola ...